Maamulka Gobolka Hiiraan oo isu diyaarinaya marti gelinta Shirka Maamul u sameynta Sh/Dhexe Iyo Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Gobolka Hiiraan oo isu diyaarinaya marti gelinta Shirka Maamul u sameynta Sh/Dhexe Iyo Hiiraan
5th August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Baladweyne ( Mareeg)-Guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Bulshada Gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan ayaa sheegay in ay socoto diyaar garow ku aadan shirka Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Sheekh Xuseen ayaa tilmaamay in dhammaan Ciidamada Gobolka Hiiraan ay ka shaqeynayaan xoojinta Nabad Gelyada Magaalada Baladweyne oo la filayo sida uu sheegay in shirkaas lagu qabto.
Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu shaaca ka qaaday in shirkii hore uga socday Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ee lagu heshiisiinayay beelaha wada dega Gobolkaas in ay hakisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya wuxuuna xusay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay ballan qaaday in shirka uu ka dhacay Magaalada Baladweyne.
Dhawaan ayey ahayd markii Gobollada Mudug iyo Galgaduud loo yagleelay Maamul Goboleed la Magac baxay Galmudug iyadoona dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qeybaha Bulshada Gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ay u tafa xeedan yihiin in Maamul Goboleed loo sameeyo Gobolladaasi.
Ciidamada Nabadsugida oo sheegay inay bur buriyeen goobo muhiim u ah Al-Shabaab